Mg Thant: September 2011
အိုင်ဖုန်း ၅ (iPhone 5) တကယ် လာတော့မည်လော
လာမည့် အောက်တိုဘာလ ၄ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အခမ်းအနားအတွက် တရားဝင်ပေးပို့တဲ့ Let's Talk iPhone ဆိုတဲ့ ဖိတ်စာထဲမှာပါတဲ့ (ပုံပါ) ပုံစံကြောင့် ကာလရှည်ကြာ ကောလဟာလ ဖြစ်နေတဲ့ Apple iPhone မျိုးဆက်သစ် iPhone5ကို စတင်မိတ်ဆက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ ပိုပြီး ခိုင်မာမှု ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ အိုင်ဖုန်း တစ်မျိုးမက မိတ်ဆက်ဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိုင်ပတ် (iPad) အတွက် တရားဝင် Facbook Apps တစ်ခုကိုလည်း မိတ်ဆက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ထပ်ပြီးထူးခြားတာက အခုလိုပွဲမျိုးကို ခါတိုင်း ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပေမယ့် ခုကတော့ ကပ်ပါတင်နို (Cupertino) မှာရှိတဲ့ Apple campus ထဲမှာပဲ ကျင်းပမယ်လို့ ဖိတ်စာထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တချို့သတင်းတွေမှာတော့ အိုင်ဖုန်း ၅ကို အောက်တိုဘာလ ၄ရက်နေ့မှာ စတင်မိတ်ဆက်ပြီး အောက်တိုဘာ ၁၄ရက်နေ့ကစပြီး အမေရိကန်၊ အဂ်လန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နဲ့ ဂျပန်တို့မှာ စတင်ရောင်းချမယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော တစ်နှစ်ကို အိုင်ဖုန်း အသစ်တစ်ခု ထုတ်နေကျ ပန်းသီးကုမ္ပဏီက ဒီနှစ်မှာလည်း နောက်ထပ်အသစ် တစ်ခု ထွက်ဖို့ အချိန်တန်နေပြီဆိုတော့ အိုင်ဖုန်း ၅ထွက်ဖို့က သေချာသလောက် ဖြစ်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ အိုင်ကြိုက်သူများ ၀မ်းသာစရာ သတင်းပါပဲ...
ဒါ့အပြင် ပန်းသီးရဲ့ မူရင်းစီအီးအိုကြီး စတိပ်ဂျော့ နားသွားပြီဖြစ်လို့ အိုင်ဖုန်းအသစ်ကို မိတ်ဆက်မယ့်လူက စီအီးအိုအသစ် တင်ကွတ် (Tim Cook) ဖြစ်မှာမို့ မိတ်ဆက်ပွဲ စင်ပေါ်မှာ စတိပ်ဂျော့လို စွဲဆောင်မှု ရှိရှိ သရုပ်ဆောင်နိုင်မလား ဆိုတာလဲ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ....
စင်ကာပူ ပရိုမိုးရှင်းများ - Gain City Expo Sale
- WAS IT A CAR OR A CAT I SAW ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ပြန်စီဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်...
- Stressed ဆိုတဲ့ စာလုံးကိုလည်း ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ဖတ်ကြည့်ရင်...
- ဒိန်းမတ်စကားလုံး svangerskabsforebyggendemiddel ကို Google Translate မှာ အဂ်လိပ်လို
- "The quick brown fox jumps overalazy dog" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဟာ အဂ်လိပ် အက္ခရာ
အားလုံးပါဝင်တဲ့ စာကြောင်း ဖြစ်တယ်။
- "သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ်ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက်
အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏ ဖတ်ခဲ့သည်" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းဟာ မြန်မာအက္ခရာများ အားလုံး ပါဝင်တဲ့
- အပေါ်နှစ်ခုက စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းလို စာကြောင်းတွေကို စာရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းပြုလုပ်မှု၊ စာလုံးပုံစံ ရေးဆွဲမှု (Font)၊ စာပန်းချီ ရေးသားမှု တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာ အသုံးပြုပြီး ဒါကို Pangram လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားမျိုးစုံတို့ရဲ့ Pangram (List_of_pangrams)
- Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis ဆိုတဲ့ စာလုံးဟာ အရှည်ဆုံး အင်္ဂလိပ် စာလုံးဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ 'အလွန်ချောမွေ့တဲ့ဖုန်အမှုန့်ကို ရှုရှိုက်မိတာနဲ့ အဆုတ်ဖူးရောင်တတ်တဲ့ အဆုတ်ရောဂါ' ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း၌ အသစ်ထွက်ရှိသော စာအုပ်များ - ၅
စာအုပ်အမည် - ၂၁ရာစု လူမှုဝေါဟာရများ (၆)
စာရေးဆရာ - မောင်ဆုရှင်
စာအုပ်အမျိုးအစား - ဆောင်းပါး
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - မြ၀တီစာပေတိုက်
ရက်စွဲ - ၁၆.၀၉.၂၀၁၁
စာအုပ်အမည် - အာကာသ အဘိဓာန်
စာရေးဆရာ - နွေကိုတူး (ပခုက္ကူ)
စာအုပ်အမျိုးအစား - အာကာသ၊ သိပ္ပံ၊ အဘိဓာန်
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - ရှင်မတောင်စာပေ
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - အာကာသသိပ္ပံ၊ နက္ခတ္တဗေဒ၊ စကြာဝဠာဗေဒ၊ ရူပနက္ခတ္တဗေဒ၊
အာကာသနည်းပညာ၊ အာကာသအတတ်ပညာ၊ လေကြောင်းအတတ်ပညာ စသည့် ဘာသာရပ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်၊ ရှင်းလင်းချက်၊ ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်အတူ နမူနာသုံး ၀ါကျများ၊ နေကြတ်ခြင်း၊ လကြတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် လဆန်း၊ လပြည့်၊ လဆုတ် ဖြစ်ပေါ်ပုံ ဖြစ်စဉ်နှင့် ဂြိုလ်များ အဘယ်ကြောင့် နောက်ပြန်သွားရကြောင်း ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်သည်။ အာကာသွား ဒုံပျံအမျိုးအမျိုး၏ တည်ဆောက်ပုံ၊ လွှတ်တင်ပုံ၊ ဂြိုလ်တုများ၊ အာကာသလွန်းပြန်ယာဉ်များ၊ ဂြိုလ်ဆင်းယာဉ်များ၊ လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ် မော်ကျူးများနှင့် များစွားသော အာကာသစခန်းကြီးများ အကြောင်း၊ အာကာသယာဉ်မှုးများအကြောင်းနှင့် အာကာသ ၀တ်စုံများအကြောင်း၊ မြေပြင် အခြေစိုက် နက္ခတာရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး စခန်းများ၊ နက္ခတာရာ လေ့လာရေး မှန်ပြောင်းကြီးများ၊ ရေဒီယို တယ်လီစကုပ်ကြီးများ အကြောင်း၊ အာကာသ ဝေါဟာရဆိုင်ရာ အကြောင်းအချင်းရာ များကို သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဇယားများနှင့် ရှင်းလင်းရေးသားထားသော ပုံပြ အဘိဓာန် စာအုပ်
စာအုပ် ဈေးနှုန်း - ၆၀၀၀ကျပ်
စာအုပ်အမည် - ကာမေသု မိစ္ဆာစာရကံဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ
စာရေးဆရာ - ပြည်ကျော်လွင် (ပညာရေး)
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - ဒေါ်ညွန့်ဝေ စာအုပ်တိုက်
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - လူပျို၊ လူအိုအမျိုးသားများ၊ မိန်းမပျိုများ၊ ချစ်သူစုံတွဲများ၊ အိမ်ထောင်သည်
ကျားနဲ့ မများ စသည်တို့အတွက် သိထားသင့်သော အမေးအဖြေများ၊ အပျို လူပျို ကျင့်စဉ်နှင့် ပရဒါရကံဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ
စာအုပ် ဈေးနှုန်း - ၁၂၀၀ကျပ်
စာအုပ်အမည် - အစိမ်းရောင် အမွေအနှစ်
စာရေးဆရာ - ဂျူး
စာအုပ်အမျိုးအစား - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုင်ရာ
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - ဂျူးစာပေ
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ချစ်တဲ့သူဟာ၊ နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့သူပဲ
စာအုပ် ဈေးနှုန်း -
စာအုပ်အမည် - သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း နိဒါန်း
စာရေးဆရာ - လူထု ဦးလှ၊ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဦးဘဖေ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့၏ ဆရာကြီး
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ပက်သက်သော ဟောပြောချက်များ
စာအုပ်အမျိုးအစား - ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - နှစ်ကာလများ စာပေတိုက်
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - စာပေလွတ်လပ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့တွင်
စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သော ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ ကဗျာများ၊ လူထု ဦးလှ၊ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဦးဘဖေ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့၏ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ပက်သက်သော ဟောပြောချက်များ စုစည်းမှု
စာအုပ် ဈေးနှုန်း - ၁၅၀၀ကျပ်
ရက်စွဲ - ၁၃.၀၉.၂၀၁၁
ပြည်တွင်း၌ ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်သစ်များကို အချက်အလက်များ ရနိုင်သမျှ တတ်နိုင်သမျှ စုစည်း တင်ပြပေးပါမည်။ ရက်စွဲများမှာ စာအုပ်ကြော်ငြာသည့် ရက်စွဲများ ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အမျိုးအစားမှာ မိမိကိုယ်ပိုင် သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်ပြီး လွဲမှားနိုင်ပါသည်။
နာမည်လေး လန်းလန်းလေး ပေးလိုက်တယ်။ ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဟင်းးး အားကျတယ် ဂီတာအဲလောက်တီး တတ်တာကို ပြောတာ...
ကမ္ဘာ့ဟက်ကင်း ရာသီမှာ ကိုယ်တိုင်အအေးမိသွားခြင်း
အခု ဒီနှစ် ၂၀၁၁ ဆိုတာ တော်တော်လေး အပြောင်းအလဲများပြီး ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း ရှိလှတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ နှစ်စကတည်းကနေ စထွက်လိုက်တာနဲ့ ပြုတ်တာတွေပြုတ် လှုပ်တာတွေလှုပ် ပြေးတာတွေပြေး ပြောင်းတာတွေပြောင်း ဖောက်တာတွေဖောက် ပေါ်တာတွေပေါ်နဲ့ တော်တော်လေး လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ရှိခဲ့တောပေါ့။
အဲဒီလိုတွေ အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာကို ကိုယ်တွေကတော့ တီဗွီဖန်သားပြင်တွေမှာ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ကြည့်လိုက် ဖတ်လိုက် လုပ်ရင်း တဖက်ကလည်း စိတ်ပါလာရင် အဲဒီအကြောင်းတွေကို အာပွားလိုက်ပေါ့။ ကိုယ်မှာမဖြစ်တော့ ခံရတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ပါနေတဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ပူဆွေးသောကရောက်ကြ ကိုယ်တွေကတော့ ထမင်းစားရေသောက်မပြတ် စုတ်တသတ်သတ်နဲ့ အနေအေးအေးပါပဲ...
သို့သော်.. ခေတ်တွေကပြောင်းလာနေပါပြီ... ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းလာနေပြီ.. ညောင်ဦးကမ်းပါးပြိုတာနဲ့ စမ္မာနဂိုကနွားပေါင်ကျိုးတာကလည်း တချို့တလေ မှန်လာပြီးလို့ဆိုရမလားပါပဲ...
ဒီနေ့ခေတ် အိုင်တီခေတ်မှာ ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို အိုင်တီနည်းပညာကို မှီခိုနေရတာတွေများပါတယ်။ ဂြိုလ်တုတွေ လွှတ်တာကနေအစ အိမ်ရှင်မတွေ ထမင်းဟင်းချက်တာအဆုံး အိုင်တီနည်းပညာပေါ်မှာ မှီခိုနေရတာတွေ အများကြီးပါ။ ဒီလို မှီခိုနေရအောင်လည်း အိုင်တီနည်းပညာက တယ်လဲဆန်း တယ်လဲမြန်ဆန်လှပါတယ်။ အိုင်တီနည်းပညာကို အကောင်းဆုံး စကားလုံးတလုံးတည်းနဲ့ တင်စားရရင် Globalization ဆိုတာပါပဲ.. ဗမာလိုဆို ကျနော်ကတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာတစ်ရွာစာလောက် ကျုံ့သွားတဲ့သဘောလို့ လူပြိန်းနည်းနဲ့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းကလူတွေနဲ့ အနောက်ခြမ်းကလူတွေ ထိုင်နေရာကမပျက် စားနေရာကမပျက် သွားနေရာကမပျက် ရွာက အဒေါ်ကြီးတွေ ဟိုဘက်လမ်းထိပ်နဲ့ ဒီဘက်လမ်းထိ လှမ်းစကားပြောသလို ပြောနေနိုင် သတင်းတွေ သိနေနိုင်လို့ပါပဲ။
လောကမှာ အကောင်းရှိရင် အဆိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အခုလို အရာအားလုံး ဒီအိုင်တီနည်းပညာအပေါ် အပေါ်မှီခိုနေရချိန်မှာ အိုင်တီဟာ နတ်ကောင်းတို့ ဖန်ဆင်းတဲ့ ဤသလင်း မဟုတ်တဲ့အတွက် သူကလည်း လောကဓမ္မတာနဲ့ မလွတ်ပါဘူး။
အပေါ်ကပြောခဲ့သလို ၂၀၁၁ရဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်းထဲမှာ ဗီလိန်သရုပ်ဆောင် တယောက်အနေနဲ့ လူတွေကို တုန်လှုပ်စေတဲ့အရာတွေထဲမှာ အိုင်တီနည်းပညာနဲ့ ပက်သက်တာလည်း ပါနေပါတယ်။ အဲတာကတော့ Hacking လို့ခေါ်တဲ့ အရေးကြီးပြီး လျှို့ဝှက်တဲ့ အိုင်တီကွန်ရက်တွေ အဖောက်ခံရတာပါပဲ...
ဂြိုလ်တုလွှတ်တာကနေအစ အိမ်ရှင်မတွေအဆုံး အိုင်တီနည်းပညာအပေါ် မှီခိုနေတယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဂြိုလ်တုလွှတ်ရာမှာ သုံးတဲ့ရော့ကတ်တွေ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စစ်လက်နက်တွေ ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီကနေအစ ဂိမ်းကွန်ရက် သီချင်းကွန်ရက်တွေ အကြီးအကျယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ SONY တို့လို ကုမ္ပဏီကနေအဆုံး ဟက်ကာတွေရဲ့ အဖောက်ခံရမှုကို အကြီးအကျယ်ခံနေရပြီး ... ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ အတတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စူးနေတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်ကွန်ရက်တွေပါမကျန် ပါဝင်ကာ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေအဖောက်ခံရတော့ လျှို့ဝှက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အီးမေးလ်တွေ လျှို့ဝှက် နည်းဗျူဟာ အချက်အလက်တွေ အကြွေးယူကတ်အချက်အလက်တွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူတိုင်းကြည့်နိုင်အဆင့်အထိ ဖြစ်ကာ အင်တာနက်ရွာကြီးဟာလဲ ဂျပန်ဆူနာမီခံခဲ့ရသလို ဒီနှစ်ထဲမှာ ကြုံခံခဲ့ရပြီး ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း အခုလိုကြုံနေရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဟက်ကင်းရာသီမှာ ကိုယ့်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသလို သတင်းဖတ်ပြီး ခေါင်းထဲမရှိသလောက်ပါပဲ...
ကျနော်ဟာ ဘလော့စရေးတဲ့အချိန်ကစပြီး နေ့စဉ်လိုလို ရုံးချိန်ထဲမှာ ပိုစ့်တစ်ပိုစ့်ခန့် အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ပိုစ့်တစ်ပိုစ့်ခန့် အခုတစ်လပြည့်ခါနီးအထိ ပုံမှန်မှန်လို ရေးသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းဆိုတော့ တက်ကြွနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ ဒီအစဉ်အလာကို ဖောက်ဖျက်လိုက်ရပါတယ်... အကြောင်းအရင်းကတော့ ဒီနေ့မနက် သူဌေးနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုအတွက် စကားပြောနေတုန်း တခြား လုပ်ကိုင်ဖော်ဖက်တစ်ယောက် အစည်းအဝေးခန်းထဲ အမောတကော ပြေးဝင်လာပြီး သတင်းတစ်ခုလာပေးပါတယ်။ သူ့သတင်းစကားကြောင့် ကျနော်ရော သူဌေးပါ ခေါင်းနပန်းကြီး သွားရပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီက လွှင့်ထားတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု အဟက်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့....
မကြာသေးမီအချိန်ကမှ ဟက်ကင်းအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုကနေ လွတ်လာရုံလေးရှိတဲ့အချိန်မှာ ဒီသတင်းစကားကြားလိုက်ရတော့ လက်ရှိပြောဆိုနေတာတွေ ပစ်ပြီး ချက်ချင်း သွားကြည့်ရပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ဆော်ပလော်တီးထားတာပါပဲ... ဒါပေမယ့် ဒါကို ကျနော်ဘက်က အဓိကဖြေရှင်းလို့ရတာ မဟုတ်တော့ တခြားဆိုင်တဲ့တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးဖြေရှင်းခိုင်းရပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘေးမှာလိုတာလေးတွေ လိုက်လုပ်ပေးရပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ကျနော်က ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေလွှင့်တင်ရတဲ့ အပိုင်းမှာ တာဝန်ခံဆိုတော့ မပြီးမချင်း ရင်တမမပါပဲ... ခုနင်ပြောခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတုန်းကတော့ ကျနော်တို့ဆီကနေတဆင့် လွှင့်တင်ထားတဲ့ ဂျပန်က နာမည်ကြီး အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဟက်ခံလိုက်ရတာပါ။ အဲဒီအချိန် ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဓိက ဖြေရှင်းရပြီး နောက်ဆွဲတွဲ သူတို့ဆီက ကွန်ပလိန်းတွေပါ အသည်းအသန် ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေပါနေတာမို့ ကံမကောင်းရင် တရားစွဲခံရကိန်းတောင် ဆိုက်တော့မလို့အထိပါပဲ...
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘလော့မရေးသေးတော့ ပြဿနာ မရှိသေးဘူးပေါ့... ဒီနေ့ကိစ္စကတော့ ကျနော်ရဲ့အချိန်တွေ တစ်နေ့လုံး ယူသွားလိုက်ပြီး.. ဘလော့ထဲရေးဖို့ကြံရွယ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်း အကုန်လုံး Draft ထဲ ထည့်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ ဘလော့ပိုစ့်အသစ် မတက်တော့ စာဖတ်သူနှုန်း စံချိန်တင်နည်းသွားတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဘလော့လေးကို ရင်နာနာနဲ့ပဲ ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်... တော်တော် အထိနာသွားတာပါပဲ :D အရင်နှစ်တွေက ဒါမျိုးမကြုံခဲ့ရပါဘူး... ဒါနဲ့ပဲ ဆက်စပ်တွေးတော လိုက်မိပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဟက်ကင်းရာသီဟာ စမ္မာနဂိုကနွား ပေါင်ကျိုးသလို ငါပါခံလိုက်သလားဆိုတာ စဉ်းစားမိရင် ဟက်ကင်းရာသီမှာ ကိုယ်တိုင်အအေးမိပြီး နှာစေးတာ ခံလိုက်ရပါတော့တယ်... (ကိုညီလင်းသစ် နှာစေးတာကို အားကျလို့ :P )
ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်လေးရဲ့ 'ကစဉ့်ကလျားသီအိုရီ' သီချင်းလေးကို သတိရကာ ညဉ်းနေမိပါတော့တယ်
~ ~ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြားတဖက်မှာ လိပ်ပြာလေး အတောင်တချက်ခတ်ခြင်းက အစပြုတဲ့ လေပွေမုန်တိုင်းများ ဒီကမ္ဘာတဖက်ခြမ်းမှာ...... ကစဉ့်ကလျားနဲ့ ဖြစ်လာ ~ ~
မက်ဒေါနား သီချင်း အယ်လ်ဘမ်အသစ် ထုတ်ဦးမည်
(Photo: Kevin Mazur/WireImage.com via music-mix.ew.com)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ပေါ့ပ်အဆိုတော်လည်းဖြစ် အသက်ကြီးနေပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကျော်ကြားနေဆဲ လူကြိုက်များနေဆဲလည်း ဖြစ်တဲ့ မက်ဒေါနား (Madonna) ဟာ နောက်နှစ် နွေဦးမှာ သီချင်းအယ်လ်ဘမ် အသစ်တစ်ခု ထုတ်ဦးမယ်လို့ ဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ရောက်ရှိနေချိန် အီတလီက တီဗွီအင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ထုတ်ဖော် ကြော်ငြာလိုက်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်း တစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
မက်ဒေါနားဟာ လက်ရှိမှာ သူမ ဒါရိုက်တာလုပ် ရိုက်ထားတဲ့ W.E ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားအတွက် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေပြီး အဲဒါပြီးရင် နယူးယောက်ကိုပြန်ကာ သူမရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ်အတွက် ဆက်လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ခုချိန်မှာ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ဟာ အနည်းငယ်သာ ပြီးသေးပြီး ဒီနှစ်ကုန်ဆုံးတဲ့အထိ အသံသွင်းခြင်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ သီချင်း အယ်လ်ဘမ်အသစ် ထွက်နိုင်မယ့်အချိန်ဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီ သို့မဟုတ် မတ်လ ၂၀၁၂ လောက်မှာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူမ ၂၀၀၈ခုနှစ်က နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ အယ်လ်ဘမ် "Hard Candy" ကတော့ စစထွက်ချင်းမှာတင် ဘီလ်ဘုတ်ဇယား နံပါတ် ၁နေရာချိတ်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဒေါနားဟာ ယခုလက်ရှိ ဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပြသနေတဲ့ W.E ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားကို ၁၉၉၁က ထွက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ True or Dare Documentary ရိုက်ကူးသူ အလက်ကက်စ်ရှီရှရန်း (Alek Keshishian) နဲ့ ပူပေါင်းရေသားထားပြီး သူမကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ် ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ချစ်သူ အတွက် ထီးနန်းစွန့်သွားတဲ့ အက်ဝပ်ဘုရင်နဲ့ သူရဲ့ချစ်သူ Wallis Simpson အကြောင်းကို အခြေခံထားတဲ့ သူမရဲ့ W.E ဇတ်ကားဟာ ဒီဇင်ဘာမှာမှ ရုံတင်ပြသမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဗင်းနစ်ရုပ်ရှင်မှာ ပြသပြီးကတည်း ဇတ်ကားနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရုပ်ရှင် ဝေဖန်သူတို့ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို အကြီးအကျယ် ခံနေရပါတယ်။ ဒီဇတ်ကားဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယမြောက် ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ ဇတ်ကားဖြစ်ပြီး ပထမဇတ်ကားက Filth and Wisdom ဆိုတဲ့ အချစ်ဟာသကားပါ။ ဒီဇတ်ကားတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ သူမရဲ့ ဒါရိုက်တာ အရည်အသွေးအတွက် ဝေဖန်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်။ ဇတ်ကားနှစ်ကားလုံးကို သူမရဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ Semtex Films ကနေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းဂီတလောကမှာ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေပေမယ့် ရုပ်ရှင်လောကမှာ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ရော ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ပါ အောင်မြင်မှုမရသေးတဲ့ အသက် ၅၃နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ပေါ့ပ်ဘုရင်မကြီး မက်ဒေါနားရဲ့ တဒါဇင်မြောက် အယ်လ်ဘမ်မှာ အရင် သီချင်းအယ်လ်ဘမ်တွေလိုပဲ အောင်မြင်မှုတွေ ထပ်ရဦးမလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူ ပရိုမိုရှင်းများ - Carrefour Expo Sale
Date : 15 to 18 September 2011
Time : 10am to 10pm (Friday and Saturday : 10am to 11pm)
Special Promotion : Additional 10% for POSB Everyday Card Members
Update - စင်ကာပူမှာနေတဲ့သူများ ည ၁၀နာရီမှာ Channel5 မှာ ပြန်ပြမည်တဲ့
အကြိမ် ၆၀မြောက် မယ်စကြာဝဠာရွေးပွဲ ၂၀၁၁ ပြိုင်ပွဲကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ ဆာအောဝ်ပေါလိုမြို့မှာ ကျင်းပနေပြီး ခုလေးတင်ပဲ ၂၀၁၁ရဲ့ မယ်စကြာဝဠာကို ရွေးသွားပါတယ်။ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ...ဆိုတာ... အောက်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင် အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဆုရစာရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Australia "Scherri-Lee Biggs"
Costa Rica "Johanna Solano"
France "Laury Thilleman"
Ukraine "Olesya Stefanko"
Portugal "Laura Gonçalves"
Panama "Sheldry Sáez"
Philippines "Shamcey Supsup"
Angola "Leila Lopes"
China "Zilin Luo"
Brazil "Priscila Machado"
Kosovo "Afërdita Dreshaj"
Colombia "Catalina Robayo"
Puerto Rico "Viviana Ortiz"
Netherlands "Kelly Weekers"
USA "Alyssa Campanella"
Venezuela "Vanessa Gonçalves"
Miss Universe 2011 Top 10 semi-finalists
2011 Miss Universe Top 5
Miss Universe 2011 Special Awards
Miss Congeniality - Miss Montenegro "Nikolina Lončar"
Miss Photogenic - Miss Sweden "Ronnia Fornstedt"
Best National Costume - Miss Panama "Sheldry Sáez"
1st runner-up - Miss Ukraine "Olesya Stefanko"
2nd runner-up -	Miss Brazil "Priscila Machado"
3rd runner-up -	Miss Philippines "Shamcey Supsup"
4th runner-up	- Miss China "Zilin Luo"
Miss Universe 2011 - Miss Angola "Leila Lopes"
မယ်စကြာဝဠာ ၂၀၁၁ ကို အန်ဂိုလာမယ် "လိုင်လာလုစ်" က ရရှိသွားပါတယ်။ လိုင်လာလုစ်ဟာ အသက် ၂၅နှစ်၊ အရပ်ပေ ၅ပေ ၁၀လက်မခွဲ ရှိကာ ဘန်ဂူလာ (Benguela)၊ အန်ဂိုလာမှာ မွေးဖွားပြီး၊ ယခုလက်ရှိ အဂ်လန်မှာ နေထိုင်ပါတယ်။ နာမည် အပြည့်အစုံက Leila Luliana da Costa Vieira Lopes ပါတဲ့
ဒီပွဲမှာ ထင်ကြေးပေးခံရဆုံး ဘရာဇီးမယ်ကတော့ အိမ်ရှင်အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ် တတိယနေရာကသာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။
စတုတ္ထနဲ့ ပဉ္စမ နေရာကိုတော့ အာရှသူနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မယ်နဲ့ တရုတ်မယ်တို့ကရရှိသွားပြီး အန်ဂိုလာမယ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ ဒုတိယနေရာက မယ် ကတော့ ယူကရိန်းမယ် "စတပ်ဖန်ကို" ဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်လာလုစ်ကို ၂၀၁၀ရဲ့ မယ်စကြာစဠာ မက္ကစီကိုမယ် "ဇန်မိနာ နဘရက်" (Ximena Navarrete) က သရဖူဆောင်းပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ရဲ့ မယ်စကြ၀ဠာ အဖြစ် သတ်မှတ် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
မယ်စကြာဝဠာ ၀င်ပြိုင်မယ့်သူဟာ လုံးဝ လက်မထပ်ရသေးတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့လိုပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့နှစ်ရဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ရက်နေ့မှာ အသက် ၁၈နှစ် မငယ်တဲ့သူနဲ့ ၂၇နှစ်ထက် မကြီးတဲ့သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
ပြည်တွင်း၌ အသစ်ထွက်ရှိသော စာအုပ်များ - ၄
စာအုပ်အမည် - တိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဘ၀ပုံရိပ်
စာရေးဆရာ - စေတနာလှိုင် (ရေစကြို)
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - ရန်အောင်စာပေ
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - နိုင်ငံကျော် တိုင်းရင်းဆေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများ
တိုင်းရင်းဆေး ပြပွဲပုံရိပ်များ၊ တိုင်းရင်းဆေး အညွှန်းများ
ရက်စွဲ - ၁၁.၀၉.၂၀၁၁
စာအုပ်အမည် - ၆၀ ကျော်သော်
စာရေးဆရာ - ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ) စုစည်းတင်ပြသည်။
စာအုပ်အမျိုးအစား - ကဗျာ၊ ဓမ္မစာပေ၊ ဆောင်းပါးများ
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - ဒွေးသစာပေ
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - စံကင်း ဆရာတော်၊ မဟာစည် ဆရာတော်၊ မိုးကုတ် ဆရာတော်
ဘဒ္ဒန္တက၀ိသာရ၊ ဆန်းလွင်၊ သုခ၊ ဦးရွှေအောင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)၊ ဒဂုန်တာရာ၊
နောင်၊ ဇေယျာတက်တိုး၊ တိုက်စိုး၊ ပါရဂူ၊ မောင်ပေါ်ထွန်း၊ လူထုဦးလှ၊ မြသန်းတင့်၊ ဘိုကလေး တင်အောင်၊ ဦးဖိုးကျား၊ သော်တာဆွေ၊ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်၊ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၊ မောင်ဝဏ္ဏ၊ မင်းလူ၊ ဒေါက်တာ ရဲနိုင်၊ နုနုရည် (အင်းဝ)၊ မစန္ဒာ စသည့် စာရေးသူ ဆရာတော်များ၊ စာရေးဆရာကြီးများ စာရေးဆရာမကြီးများ၏ တရား၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုများ စုစည်းထားသည့် စာအုပ်
စာအုပ် ဈေးနှုန်း - ၃၀၀၀ကျပ်
စာအုပ်အမည် - ဂဏန်းဗေဒင်
စာရေးဆရာ - တက္ကသိုလ် စိုးမိုးနိုင်
စာအုပ်အမျိုးအစား - ဗေဒင်
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - မြန်မာစကားစာပေ၊ ရန်အောင်(၁)စာပေ
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - ၂၀၁၂ တစ်နှစ်လုံးအတွက် တွေ့ကြုံရမည့် ကံတရား၊ ဘ၀အောင်မြင်ရေး
လမ်းညွှန်၊ လအလိုက် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေး၊ ယတြာများ ဖော်ပြထားသည့် ဂဏန်းဗေဒင် ဂဏန်း ၁ မှ ၉အထိ စာအုပ် ၉အုပ်
စာအုပ်အမည် - မုန်တိုင်း ရှောင်ကွင်း အန္တရယ်ကင်း သင်္ဘောမောင်းနှင်နည်း
စာရေးဆရာ - ကြိုင်လျှမ်း
စာအုပ်အမျိုးအစား - သင်္ဘောသားဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်တိုက် - စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ
စာအုပ် အကြောင်းအရာ - ဂျာနယ်များ၌ ဖော်ပြပြီးသော ဆောင်းပါးများ ၂၄ပုဒ် စုစည်း ထုတ်ဝေခြင်း
စာအုပ် ဈေးနှုန်း - ၁၆၀၀ကျပ်
- The duration record foraface-slapping contest was set in Kiev, USSR, in 1931 whenadraw was declared between Bezbordny and Goniusch after 30 hours.
၁၉၃၁ခုနှစ် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ကိဗ်မြို့ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပါးရိုက်ပြိုင်ပွဲမှာ ဘက်ဇ်ဗော့ဒနီ နဲ့ ဂိုနီယက်ဇ်တို့ နှစ်ဦးဟာ နာရီသုံးဆယ်ကြာ အကြိတ်အနယ် ပါးရိုက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာတော့ နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ဂိုးမသွင်းနိုင်ကြဘဲ ... အဲလေ.. :P အနိုင်မရရှိကြဘဲ သရေပွဲ အဖြစ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး အရှည်ကြာဆုံး ပါးရိုက်နိုင်သူ နှစ်ဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
- Bernard Clemmens of London managed to sustainafart for an officially recorded time of2minutes 42 seconds
လန်ဒန်က ဘားနက် ကလန်းမန်း ဆိုတဲ့သူဟာ ၂ မိနစ်နဲ့ ၄၂စက္ကန့်ကြာ အီး ကိုဆွဲပေါက် နိုင်အဖြစ် တရားဝင် မှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်။
အဂ်လန်က အသက် ၁၂နှစ် အရွယ် ဒိုနာဂရစ်ဖစ် ဆိုတဲ့သူဟာ ၁၉၈၁ ဇန်န၀ါရီ ကနေ ၁၉၈၃ စက်တင်ဘာထိ ၉၇၈ရက် တိုင်တိုင် ၅မိနစ်တစ်ကြိမ်ခန့်လောက် နှာချေနေခဲ့လို့ အရှည်ကြာဆုံး နှာချေတဲ့လူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားပြီး Gesundheits ပေါင်း လေးသန်း ခြောက်သိန်း ရှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင် ငါးရာ တစ်ဆယ့်လေး ခါ ရခဲ့ပါတယ်။
(ဂျာမနီမှာ တစ်ယောက်ယောက်က နှာချေရင် Gesundheit လို့ ပြောကြတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ကျန်းမာပါစေတဲ့ မသေချာရင် မရှင်လေး ကို မေးကြည့်လို့ရတယ်။ :P )
Bonus: အောက်က ဗွီဒီယိုကလစ်လေး ကြည့်ကြည့်ပါ။ ကြည့်သူပေါင်း ၁၁၆သန်းကျော် ရှိတယ်။ မရီရရင် အသေသတ်.. :D
နှစ်ပေါင်း တစ်ရာတိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ မဂ်လာရက်
စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့က လက်ထပ်မဂ်လာပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အိုးဟိုင်းယိုးက သတို့သမီးလေးဟာ သူမတို့ အဘီလက်ထက်ကတည်း မျိုးရိုးစဉ်ဆက် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ လက်ထပ်မဂ်လာပွဲရက်ကို နှစ်ပေါင်းတရာပြည့် ထိမ်းသိမ်းခဲ့သူ အဖြစ်မှတ်တမ်း ၀င်သွားခဲ့ပါပြီ
လွန်ခဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာက စက်တင်ဘာ ၉ရက်နေ့ဟာ သူမတို့အဘီ လက်ထပ်ခဲ့နေ့ဖြစ်ပြီး... သူမရဲ့ အဘေး၊ အဘိုးအဖွားတို့နဲ့ အဖေအမေတွေဟာလည်း ဒီရက်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပါ။ သူမလက်ထက်မှာတော့ ဒါဟာ ရာစုနှစ်တစ်ခုရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမနဲ့ သူမရဲ့ သတို့သားတို့ လက်ထပ်မယ့်ကို ရွေးကြတဲ့အခါ သူမတို့ အဘိုးအဖွား အဖေအမေတွေ လက်ထပ်ပြီးစီးကြောင်း ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းလေးတွေကို ပြပြီး သူမလည်း ဒီ စက်တင်ဘာ ၉ရက်မှာ မဂ်လာဆောင်ချင်ကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာ... သူမရဲ့သတို့သားက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ သတို့သားကတောင် နောင်သူတို့ရဲ့ သာသမီး မြေး မြစ် တီ တွတ် တွေထိ ဒီအမွေကို လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူမတို့ မိသားစုဝင်တွေက သူတို့ရဲ့ ဘေး ဘိုးတွေ ဒီရက်ကိုမှ ဘာကြောင့် သတ်မှတ်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာကို သေချာ မသိရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့.... ဗျာ...
ရည်စားဟောင်းကို ဖုန်းအကြိမ် ၆၅၀၀၀ ခေါ်လို့ တရားစွဲခံရတဲ့ အမျိုးသမီး
နယ်သာလန် သဟိတ်ခ်မြို့က အသက် ၆၂အရွယ် အမျိုးသားတစ်ယောက် သူရဲ့ရည်စားဟောင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေမှာ အဖုန်းအကြိမ်ပေါင်း ၆၅၀၀၀ခန့် ထပ်တလဲလဲ ခေါ်ခဲ့လို့ တရားရုံးကို တက်ရောက် တိုင်ကြားကာ တရားစွဲခဲ့ပါတယ်...
အဲဒီလိုတိုင်ကြားခဲ့လို့ သဟိခ်မြို့က ရဲတွေဟာ ထိုဖုန်းထပ်တလဲလဲ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၄၂အရွယ် အမျိုးသမီးကို သူမရဲ့နေအိမ်ရှိရာ ရိုတာဒန်မြို့ကနေ ဟန်းဖုန်းအများအပြား၊ ကွန်ပြူတာတွေနဲ့အတူ သွားရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။
တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုကြတဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသမီးက သူ့ကိုတရားစွဲတဲ့ အမျိုးသားဟာ သူမနဲ့ ဇတ်လမ်းရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ သူမ ဖုန်းခေါ်တဲ့အကြိမ်ရေဟာ အဲလောက်မများပါဘူးလို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး တရားလို အမျိုးသားကတော့ သူမနဲ့ သူနဲ့ ဇတ်လမ်းရှိခဲ့တာကို ငြင်းဆိုသွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ တရားရုံးက အမျိုးသမီးကို တရားလိုအား နောက်ထပ်ဖုန်းထပ်မခေါ်တော့ဖို့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ :D
စင်ကာပူ ပရိုမိုးရှင်းများ Charles & Keith Warehouse Sale
Date: 8 – 11 September 2011
Venue:6Tai Seng Link (Level 3), Charles & Keith Group Headquarters, Singapore 534101
အိုင်ဖုန်းသုံးတဲ့ ဘလော့ကာတွေ အတွက် Google ရဲ့ Blogger App လာပါပြီ
Photo via googlemobile.blogspot.com
အိုင်ဖုန်း (iPhone), အိုင်ပတ် (iPad), အိုင်ပေါ့တ် (iPod) တွေ သုံးနေတဲ့ ဘလော့ဂါအတွက် ဘာလော့ကာ ဆော့ဝဲလ်ကို (Blogger App) ကို Apple Store မှာ ရနိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဂူးဂဲလ်ရဲ့ မိုဘိုင်း ဘလော့ထဲမှာ မနေ့က ကြော်ငြာသွားပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ အိုင်ပေါင်းစုံကနေ ရထားစီးရင်း၊ ကားစီးရင်း၊ လမ်းလျှောက်ရင်း ပိုစ့်အသစ်တွေ တင်လို့ရတော့မယ်။ ရေးရုံရေးပြီး မတင်သေးလဲ ခါတိုင်းလို Draft ထဲမှာ သိမ်းထားလို့ရတယ်။ အရင်တုန်းက ကွန်ပြူတာနဲ့ တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်တွေအားလုံး ပုံတွေအားလုံးလဲ အဲထဲကနေ မြင်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင် တည်းဖြတ်နိုင်အောင်လည်း ဆော့ဝဲလ်က ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးက ဓါတ်ပုံကို ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ချက်ချင်းရိုက်ပြီး တင်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ရှိပြီးသားပုံတွေကို Gallery ထဲကနေ ရွေးပြီးတင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလေးကို သုံးဖို့အတွက်တော့ Apple iOS 3.2 နဲ့ အထက် သုံးထားတဲ့ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပတ်၊ အိုင်ပေါ့ တွေရှိရပါမယ် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော်က Android သုံးတဲ့လူပါ။ Android အတွက် Blogger App က ထွက်တာ ဒီနှစ်စကတည်းပါ။ ကျနော် Android ဖုန်းစသုံးတာ မနှစ် ဒီဇင်ဘာကပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ ဖြစ်အင်ကို ကြည့်ပါဦး...
အဟင့်... ရင်နာစရာ မကောင်းဘူးလား... (အောက်က ပုံတွင် ရှုပါ)
ဘာကြောင့်မှန်းလဲတော့ မသိပါဘူး ခင်ဗျာ...
- အိုက်စလန်နိုင်ငံမှာ မီးရထားလမ်းနဲ့ မီးရထားစနစ်တွေ မရှိသလို၊ ကိုယ်ပိုင် စစ်တပ် လည်း မရှိပါဘူး။
- တောင်ကိုရီးယားမြို့တော် နာမည် 'ဆိုးလ်' ရဲ့အဓိပ္ပါယ်မှာ 'မြို့တော်' ပဲဖြစ်ပါတယ်။
- ကမ္ဘာပေါ်မှာ တက္ကသိုလ်အများဆုံးနိုင်ငံဟာ ............... အိန္ဒိ​ယနိုင်ငံပါ။ Source
(တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကို တွေးနေတာ မဟုတ်လား :P)
- အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ်ချီကန်မှာ ထူးခြားတဲ့ နာမည်နဲ့ မြို့နှစ်မြို့ ရှိတယ်။ တစ်မြို့က HELL (ငရဲမြို့) နဲ့ တခြားတစ်မြို့ကတော့ PARADISE (သုခဘုံမြို့) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- အမြဲတမ်းလူ နေထိုင်မှု မရှိသလို ဘယ်နိုင်ငံမှလည်း မပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က နေရာတစ်ခုကတော့ အန္တာတိက ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ ထဲက အစက်နှစ်စက် (ပဟေဠိ)
ကလစ်နှိပ်ပြီး ပုံအကြီး ချဲ့ကြည့်နိုင်သည်။
ကဲ ဒီတစ်ခါ ကျနော်ကချည်းပဲ ဇွတ်မရေးတော့ဘဲ ကျနော့် စာဖတ်ပရိသတ်ကို ပဟေဠိလေး နည်းနည်း ဖွက်ချင်ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံကို ကြည့်ပါ... မှောင်မှောင်မည်းမည်းထဲက အစက်နှစ်စက်ထဲ ပါတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ .... ဒါက တကယ့် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံပါ။ ဘာမှ ထပ်ပြီး မပြုပြင်ထားပါဘူး... ဒီဓါတ်ပုံကို ရဖို့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျခဲ့ရပါတယ်...
ကဲ မေးခွန်းကတော့ ...
၁. ဘာကိုရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံပါလဲ...
၂. ဘယ်သူက ရိုက်ထားပါသလဲ...
၃. အကြောင်းအရာကိုပါ... ရှင်းပြနိုင်ရင် ရှင်းပြပေးပါ။
အခုတလော အင်တာနက် သတင်းတွေထဲ ဒီဓါတ်ပုံ အကြောင်း ပါပါတယ်...
အဖြေတွေကို ကောမန့်မှာ ရေးပေးခဲ့စေချင်ပါတယ်...
ကျနော့်ဘလော့ စတာ မကြာသေးပါဘူး... ဒါပေမယ် ပရိသတ်တော့ အနည်းငယ် ရှိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်...
ဟီးဟီး အဖြေတွေရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်... အဖြေမှန်တဲ့ သူတွေကို ဆုချပါမယ်.. (တကယ် အတည်) :D